इंडोनेशिया राष्ट्रिय राष्ट्रिय पार्क
इन्डोनेसियाको इलाकामा कुल 50 राष्ट्रिय पार्कहरू छन्, जसमध्ये6मध्ये युनेस्को द्वारा संरक्षित छन् र विश्वको प्राकृतिक सम्पदाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। अर्को6बायोोस्फायर रिजर्भेसनहरू छन्, बाँकीहरू राज्यद्वारा सुरक्षित छन्। तिनीहरू जावा , कलमंतन , सुलावेसी , सुमात्रा , र राइन्चे र कोमोडोका द्वीपहरू सानो सुन्दरी आइल्याण्डको समूहको भागमा पूर्णतया पार्कमा दिइएको छ।
सुमात्रा द्वीपको राष्ट्रिय पार्क
सुमात्रा को क्षेत्र विशेष रूप देखि संरक्षित उष्णकटिबंधीय वनहरु संग छ र तीन राष्ट्रीय पार्कहरुमा विभाजित छ। 2004 देखि, टापु पुरातत्व यूनेस्को द्वारा सुरक्षित गरिएको छ। सबै तीन पार्कहरूमा तपाईं जनावरहरूको 50% जनावरहरू र सुमित्राको जंगलको बिरुवाहरू भेट्न सक्नुहुन्छ। पार्कहरुको कुल क्षेत्र 25 000 वर्ग मीटर छ। km:
Gunung-Leser National Park । यो पहाडी इलाकामा सुमात्राको उत्तरमा बेस्सरी जंगलहरू संग अवस्थित छ। लगभग आधे क्षेत्रफल 1,5 हजार मिटर तल रहेको छ, र केहि चोटहरू 2,7000 भन्दा बढीको उचाई पुग्छ। सबैभन्दा माथिल्लो बिन्दु लगभग 3,450 मिटर माथि रहेको छ, पार्कको फ्लोरा र फ्युन भिन्न हुन्छ। बन्दर प्रशंसक सुमनटान ओरांगुवानहरू हेर्न गनङ्ग लेचर नेशनल पार्कमा आउँछन्। यी जनावरहरू मात्र यहाँ बस्छन्। त्यहाँ पनि कालो र सेतो गिम्बन र बन्दरहरू छन्। बंदरहरूको बाहेक, पार्कमा तपाईंले देख्न सक्नुहुन्छ:
ओरेग्युनन्स पुनर्वास केन्द्रमा सबै भन्दा राम्रो देखिएका छन्, किनकि तिनीहरू हिमालमा जंगली पथहरूमा नराम्रो बाटोमा पर्छन्। बीच नजिकै त्यहाँ बन्दरहरूको लागि विशेष फिडहरू छन्, र बिहान बिहान पर्यटकहरूले नजिकैका जंगलहरूबाट भेला पशु राज्यका थुप्रै प्रतिनिधिहरू हेर्छन्।
राष्ट्रिय पार्क बुटिट-बारिसन। यो एक लामो संकीर्ण पट्टी समुद्र संग चट्टान संग चलिरहेको छ, केवल चौडाई को चौडाई चौडाई र 350 किलोमिटर सम्मको चौडाई। यो सानो इलाकामा बाघहरू, सुमात्रा हत्याराहरू, रेश्रो र जीवित खरगोशहरू हराउँथे। हाइट्स विशेष संरक्षण को अधीन छ, किनकी त्यहाँ उनको लगभग 500 हो, जो दुनिया मा कुल पशु को एक चौथाई छ। यस्तो सानो छोटो भूमिमा तपाईं पहाडी जंगलहरू आफ्नो बिरुवाहरू, कम बिरुवा उष्णकटिबंधीय जंगलीहरू र समुद्र तटमा स्थित मंगोवर प्रवासी भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय पार्कको जंगलमा एक देशको सबैभन्दा सुन्दर झरना, क्युबा-पेराउ भेट्न सकिन्छ। साथै पर्यटकहरू सुवो वरिपरि हट स्प्रिंग्सको भ्रमण गर्छन्।
केरिनची-सेबिट नेशनल पार्क। यसको सुन्दर क्षेत्र 13,700 वर्ग मीटर को कुल क्षेत्र संग। किलोमिटर उच्चतम ज्वालामुखी इंडोनेशिया - केरिनची (3800 मीटर) को आसपास स्थित छ। पार्क को मुख्य भाग 2000 मीटर को स्तर मा छ। यो अधिकतर पहाड को ढलान छ जो उष्णकटिबंधीय जंगलहरु संग छ र दुर्लभ प्रजातिहरु र जनावरहरु को शिकार हो। केरिनिचिनी-सेबिल पार्क एक संरक्षित क्षेत्र हो जुन सुमित्रा बाघहरूको खतरामा परेका प्रजातिहरू जीवित छन्: त्यहाँ त्यहाँ 200 जना छन्। यसको अतिरिक्त तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ:
Sunda को तेंदुए;
फ्लोरिडा प्रेमीले अर्नोल्डको रफ्लेसको अद्भुत संयन्त्रलाई प्रशंसा गर्न सक्छन्, यसको उज्ज्वल रातो रङका पङ्क्तिहरू एक मीटर भन्दा बढी छ, जसमा तपाईँले amorphousphallus भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, जसको उचाइ4मिनेट वा बढी पुग्न सक्छ।
जावा आइल्याण्डको राष्ट्रिय पार्क
यस टापुको संरक्षित इलाकाहरू उनीहरूका जनावर र बिरुवाको जीवनको लागि रोचक छन् । तिनीहरूमध्ये केही वर्षा वर्षाहरू छन्, जहाँ तपाईं नारंगीट, तिमोरा हिरण, जाभिन रोस्कोरोसहरू भेट्न सक्नुहुन्छ र संसारमा सबैभन्दा ठूलो फूलको मासुको आनन्द लिनुहोस् - रफल्सिया अर्नोल्ड। त्यसैले, जाभाका मुख्य राष्ट्रिय पार्कहरू हुन्:
बमोरो-टिन्गर-सेमर। "ज्वालामुखीको पार्क" जावाको टापुको दक्षिणी टिपमा अवस्थित छ। उनी दुई सबैभन्दा लोकप्रिय ज्वालामुखी, बमोरो र सेमर र उनको पार्थिवहरूमा बाँच्ने टिन्गगर व्यक्तिको नाममा उनको नाम धन्यवाद थियो। पार्क को सबै भन्दा ठूलो ज्वालामुखी सेमीर (या Mahameru, जो एक विशाल पर्वत को रूप मा अनुवादित) छ। ऊँचाईमा 3,676 मिटर पुग्छ, र हरेक 20 मिनेटमा क्याटरले वायुमण्डलमा भाप र आशको एक भाग खसाल्छ। इंडोनेसियाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखी कहिल्यै सुत्दैन। 2010 मा, उनले आफ्नो चरित्र दिखाए, टेंगगेर नजिकैका गाँउहरु को विनाश को नष्ट गर्न। ब्रोमो - पर्यटकहरू बीच सबैभन्दा लोकप्रिय ज्वालामुखी, यो धेरै कम छ, केवल 2392 मीटर, र यो सजिलो छ। क्रेटर भित्र, तपाईं सधैँ फाँसिङ अड्रिड धुआन देख्न सक्नुहुन्छ, जुन हावा द्वारा फैलिएको छैन। पर्यटकहरू यहाँ आउँछन्:
मार्टीन परिदृश्य प्रशंसा गर्न इन्डोनेसियाको लागि विशेष छैन;
ज्वालामुखीको गतिविधि नजिक नजानुहोस्;
धेरै शताब्दीका लागि यी ढोकाहरूमा बाँचेको स्वदेशी मान्छे संग परिचित।
उजुङ-क्युलबाम । दक्षिणपश्चिमा जावामा सुन्दिया शेल्फ छ, जसमा एपनाम प्रायद्वीप र धेरै सानो द्वीपहरू समावेश छन्। 1992 मा यस स्थानमा उजुङ-कोउलबम्भ गठन भएको थियो, र अहिले यूनेस्को विश्व विरासतको भाग हो। सुरक्षा अन्तर्गत अद्वितीय तल्लो भूमिको वर्षा वनहरू छन्, जसमा त्यहाँ बिरुवाहरू र जनावरहरू छन्, यस क्षेत्रका लागि मात्र विशेषता। उजङ्ग-क्लौन राष्ट्रिय पार्कका आगन्तुकहरूले सिग्नेटर नदीमा उठाउछन् र समुद्रमा डुब्न सक्छन्, अर्कोतिर जलाशय कोरल चट्टान।
करीमनजवा । एक अद्वितीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जो जावा मा छैन, तर उत्तर 80 किमी, 27 साना अपरिवर्तित द्वीपहरुमा। यहाँ दुर्लभ पर्यटक आउनुहोस् जुन अनावश्यक प्रकृतिको प्रशंसा गर्छ, सर्फिङ र पन्ना पहाडहरूमा हिंड्ने। बर्फ-सेतो बालुवाको साथ वास्तविक स्वर्गदूत समुद्र तटहरू, कोरल चट्टानहरू, धेरै समुद्री जनावरहरू डाइभाइभेसर र स्नोर्कलिङको पारोसेर्सहरूलाई आकर्षित गर्छन्।
इंडोनेशिया मा कोमोडो राष्ट्रीय उद्यान
यो पार्क सबै भन्दा लोकप्रिय मध्ये मानिन्छ। यो 1980 मा कोमोडो र रन्चको दुई छिमेकी द्वीपहरूमा स्थापना गरिएको थियो। अब पार्क यूनेस्कोको सुरक्षा अन्तर्गत छ। 600 वर्ग मीटर को अतिरिक्त। किलोमिटर भू-भाग को क्षेत्र मा पार्क मा तटीय सागर को पानी पनि शामिल छ, जसमा तपाईं विशाल मांता किरण सहित धेरै दुर्लभ जनावरहरु लाई पा सकते हो।
कोमोडो नेशनल पार्कको सबैभन्दा लोकप्रिय निवासी, इन्डोनेसियाली भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको लागि प्राग्राहीिक छेउछाउहरूको सन्तान हो, जसले कोमोड ड्रेगन भनिन्छ। यो3मीटर लामो लामो समयसम्म छेउछ, जुन यस क्षेत्रमा3लाख भन्दा बढी वर्षका लागि बाँचिरहेका छन्।
बाली-बारात नेशनल पार्क
बालीको टापुका पश्चिमी भागमा आइपुग्दा, तपाईं यस प्रमोदवनमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यो मानसून र उष्णकटिबंधीय वनहरू, मंगोवाना प्रजाति र रेती समुद्र तटहरू शुद्धतम पानीको पानी र कोरल चट्टानहरूको साथमा, स्केट्स, समुद्री ककुलहरू, कछुआहरू र उज्यालो रंगहरूका साथ धेरै माछाहरू मार्फत मिल्दछ। बाली-बारत राष्ट्रिय पार्कको जंगलमा, तपाईं जनावरहरूको 200 भन्दा बढी प्रजातिहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ, जसमा:
पार्क को क्षेत्र राज्य को संरक्षण को अधीन छ, कुनै होटल, अतिथि घर, कैफे र रेस्टुरेन्ट छैनन्, यहाँ कुनै व्यापार र पर्यटक आकर्षण छैन। पार्क केवल दिनको समयमा खुला छ।
इंडोनेशिया मा यात्रा
दक्षिण कोरियामा छुटहरू
इंडोनेशिया को संस्कृति
बच्चाहरूको लागि सिंगापुर
मालदीव मा यातायात
दक्षिण कोरियाको संस्कृति
डबल उडाउन योग्य बेड
विन्सेन्ट क्यासेल ​​ब्राजिलमा मोनाका बेलुकी को बिना आफ्नो छोरीहरु संग छ
बाक्वाटट पुष्पको लागि पकाउनुहोस्
वजन घटाने को लागि Enterosgel
जनी डिपप र एम्बर सुर्डको विवाह
भान्साको लागि सिरेमिक टाइल्स
लिमहरूसँग ड्रेस गर्नुहोस्
बिग्रेको फूल केटी
चश्माली - नुस्खा
कार्यको लागि आवेदन गर्दा स्व-प्रस्तुति
आंतको Dysbacteriosis - लक्षण र वयस्कों मा उपचार
इन्फ्लूएंजा 2017-2018 विरुद्ध विषाणु - कसलाई, कहिले र यस मौसममा रूट लिने?
के गर्भावस्थाको बेला मैले व्यायाम गर्न सक्छु?
जैतून - क्यालोरी सामग्री
बेडरूममा वालपेपर कसरी छनौट गर्नुहुन्छ?
बास्कहरू आफ्नै हातले कपडा बनाइदिन्छ
बच्चाहरु को लागि लटिकल मिश्रण
मिनिसिङ मासुको द्रुत जल्दी मा
पोस्सिनी मशरूम संग सलाद